CDP choline အမှုန့် (987-78-0) hplc≥98% ကိုဝယ်ပါ။ | AASraw ပေးသွင်း
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / CDP choline အမှုန့်
rating: SKU: 987-78-0. အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ CDP choline အမှုန့် (987-78-0) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
CDP choline အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
CDP choline အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: CDP choline အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 172-175 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဦးနှောက် function ကိုများနှင့်တစ်ဦးအပိုထပ်တိုးတိုးမြှင့်အတွက် CDP choline အမှုန့်
အမည်များ: CDP choline အမှုန့်, citicholine, Neurocoline
CDP choline အမှုန့်အသုံးပြုမှု
CDP-choline သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအခြားအလားအလာအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာသာမန်လူငယ်တစ်ဦးမှတျဉာဏျ Enhancer အဖြစ်အသုံးပြုသို့သော်ဤပါးစပ် CDP-choline နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှကြောင်းအကြံပြုအချို့ကြွက်လေ့လာမှုများရှိနေသော်လည်း, ဒီအချက်မှာလူငယ်မလူ့လေ့လာမှုများအချိန်ရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု (ပုံတူကူးယူရန်လိုအပ်ပါသည်) ကိုအနိမ့်ထိုး CDP-choline နှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးမှတ်ချက်ချခဲ့သည်နှင့် CDP-choline အဖြစ်ကောင်းစွာကင်းနှင့် (ပဏာမသက်သေအထောက်အထားအကြံပြု) အစားအစာနှစ်ဦးစလုံးဆန့်ကျင် anti-စွဲလမ်းဝင်းအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။
CDP choline ဒါကောင်းစွာဒဏ်ခံသောကွောငျ့, ဆေးများ၏ကျယ်ပြန့သိသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မပါဘဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိတ်ကွယ်ရာနာရီ 250 ဖို့တစ်ခုတည်းထိုးဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုဆေးများ 1000 အတွက်ဖြစ်စေ, မီလီဂရမ် 8 မှဘယ်နေရာမှာမဆို 12 ထံမှတစ်ဦးကိုနေ့စဉ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာထိုး, ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောစဉ်းစားသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု MIT မှလေ့လာမှုသက်ရောက်မှု 4000 မီလီဂရမ်တစ်ထိုးအလွန်မြင့်မားဆေးများကိုယူပြီးအတွက်နည်းနည်းတန်ဖိုးကိုလည်းမရှိညွှန်ပြဟန်အရာ, တစ်ဦး 2000 မီလီဂရမ်ထိုးသူများအနေဖြင့်တိုင်းတာကွဲပြားခြားနားကြဘူးကြောင်းပြသထားတယ်။
CDP choline ဆေးတောင့်ခြင်းနှင့်အမှုန့်ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးပါးစပ်ထိုး၏ 95% ခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူနေသည်အဖြစ်ရေတွင်ပျော်ဝင်များနှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
CDP choline အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့လေ့လာမှုများ CDP choline ပင်မြင့်မားသောဆေးများမှာမရှိမှတ်တမ်းတင်လေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ Toxicological စမ်းသပ်မှု, ရောဂါများ, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မမှန်အမျိုးမျိုး၏ကုသမှုပြုလုပ်ရန်သင့်လျော်အောင်ဝိသေသလက္ခဏာများက cholinergic system ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမလေးနက်သောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြခဲ့ကြပြီးကဿုံသည်းခံသည်။
ရင်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အိပ်မပျော်ခြင်း, ဝမ်းလျှောကွာခဏဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်အစီရင်ခံထားပါပြီ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်အပေါ်အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများပြီးစီးပြီ, ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရှိသို့မဟုတ်နို့တိုက်နေသောသူတို့ကို CPD choline အသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
CDP choline ဆို nootropic အသုံးပြုသူရဲ့ဖြည့်စွက် regimen ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွင်ပြုလုပ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အိုမင်း, နာမကျန်းခြင်း, ဒဏ်ရာနှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုဆန့်ကျင်တားဆီးဖို့လူသိများနေတဲ့သက်သေပြချက်မှတ်ဉာဏ် Enhancer, ပါပဲ။
ဒါဟာတိုးချဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်, ပိုကောင်းတဲ့အာရုံနှင့်ရှင်းလင်းအတွေးပေးပါသည်။ အခြားအ nootropics နဲ့ပေါင်းပြီးကအစွမ်းထက်အလားအလာင်နှင့်အထူးသဖြင့် racetams နှင့်အတူ stacked အခါမဖြည့်စွက်အခြားမပါဘဲရောက်ရှိနိုင်မယ့်အဆင့်အထိသိမြင်မှုတိုးမြှင့်ယူများ၏ညှိနှိုင်းသက်ရောက်မှုဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဆေးခန်းကိုစမ်းသပ်နှင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့မြင့်မားသောဆေးများအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုရရှိရန်မလိုအပ်သော်လည်း, CDP choline, အလွန်ကောင်းစွာပင်မြင့်မားသောဆေးများမှာသည်းခံခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ မရှိမှတ်တမ်းတင်လေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်ကြောင့်ဥရောပနှင့်ဂျပန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆေးကုသမှုများအတွက်အတည်ပြုပါတယ်။
CDP choline nootropic အသုံးပြုသူများသည်အကြားခိုင်မာသောနှင့်ကြီးထွားလာအောက်ပါအချက်များကိုရှိပါတယ်တစ်ခုတတ်နိုင်, အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါဖြည့်စွက်သည်။ သင်သည်သင်၏ nootropic ထပ်ကနေအများဆုံးရချင်တယ်ဆိုရင်, CDP choline ကြိုးစားနေရကျိုးနပ်မယ့် choline အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
(1) CDP choline အမှုန့်အလုပ်ပါသလား
CDP Choline ဟာသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကူးပြီးနောက်ပြန်အတွေးနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော Acetylcholine receptors မှတဆင့်အသုံးပြုစုပ်ယူသည်အဘယ်မှာရှိ CDP Choline သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်အူအတွင်းရှိ Choline နှင့် cytidine သို့ hydrolyzed ဖြစ်ပါတယ်။ CDP Choline ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆိုပါ neuro အကာအကွယ်အကျိုးအတွက်အလားအလာ Cardiolipin နှင့် Sphingomyelin နှစ်ဦးစလုံး၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်နောက်ထပ်အကြံပြုယန္တရား glutathione ပေါင်းစပ်၏ဆွဖြစ်ပါတယ်။ CDP Choline လည်းထိုကဲ့သို့သော acetylcholine, norepinephrine နှင့် dopamine အဖြစ်အများအပြား receptors ၏အချက်ပြမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
သိမြင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်နှင့်အတူကြည့်ရှုခံရဖို့ရှိသည်သော်လည်းများစွာသော variable တွေကိုနေဆဲရှိပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့က CDP Choline တိကျတဲ့လူတစ်ဦးအဘို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပဲဘယ်လောက်ထိရောက်ဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်ခက်သည်။ ဒါဟာအားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်လက်ရှိသိမြင်မှုစွမ်းရည်အဖြစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုဆင်းလာပါတယ်။
CDP choline သည်အခြား nootropics potentiates နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုများစွာသောရှုထောင့်မြှင့်တင်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အစွမ်းထက် nootropic ဖြည့်စွက်သည်:
•မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်မြှင့်: CDP Choline မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သည်၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွက်ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးလူသိများသည်။ ဒါဟာမကြာခဏ Anti-အိုမင်းခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
•စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်များတိုး: အထွတ်အထိပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ထိနျးသိမျးမကြာခဏအိုမင်းနှင့်အတူဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းနှေးကွေး-Down ခံစားနေရပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုမှစာမေးပွဲဖြေ facing ကျောင်းသားများကို မှစ. , လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ CDP Choline တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး bioenergetics တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အိုမင်းနှင့်အတူဆက်စပ်သိမြင်ကျဆင်းမှုလျော့ပါးစေရန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အပေါ်သိသိသာသာအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြသခဲ့ကြသည်။
• သာ. ကောင်း၏အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု: CDP choline လျော့နည်းအာရုံ, လေ့လာနေအသစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ပိုင်းတောင်းဆိုမှုများတာဝန်ပြီးပါကများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်အတူကြာကြာကာလအဘို့အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ လေ့လာရေးဒီပင်လေဖြတ်, ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအပါအဝင်ပြင်းထန်သောအခြေအနေများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ကြောင်းပြသပါ။
•အလားအလာများနှင့်အသံချဲ့စက်အခြား Nootropics: အတော်များများ nootropic အသုံးပြုသူများကဖြည့်စွက်မဆို stack သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ CDP တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ရှိ choline စဉ်းစားပါ။ တစ်ခုထူးချွန် choline အရင်းအမြစ်, ကတစ်ခါတစ်ရံ racetams နှင့်ဆက်နွယ်သောအသေးအဖွဲခေါင်းကိုက်တားဆီး၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုပိုမိုအားကောင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအောင်, racetam လူတန်းစား nootropics နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါဟာ piracetam နှင့်အတူပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်အခါအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်မှတ်ဥာဏ်ယိုယွင်းစတင်ခြင်းနှောင့်နှေးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
CDP choline ကုန်ကြမ်း Powder
CDP choline ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း
CDP choline အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ CDP choline အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို